दुई युवतीले हत्या गरि लुटे | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तृतीयांश बजेट मात्र स्वीकार्छु
कस्तो अचम्म २ महिनाको नानीको पेटमा पनि बच्चा ! →
मंसिर ४ – पत्याउनै गाह्रो भयो । साधारण लाग्ने दुई युवतीले यत्रो अपराध कसरी गरे होलान् ? तर प्रमाणले उनीहरुलाई नै दोषी देखायो । एक ६९ वर्षीया महिलाको हत्या गरि गरगहना र अन्य सामान लुटपाट गर्ने दुई युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
घटनाको मुख्य योजना जेनिशाले बनाएको र कल्पनालाई त्यसमा समाबेस गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । जेनिशा र मृतक राणा बिच टाढाको नाता थियो र जेनिशा उनको घरमा आउने जाने गरिरहन्थिन् । ‘मृतक महिलालाई काममा सघाउने, गफ गर्ने गरेकी थिईन्’ महाशाखाका एसएसपी देबेन्द्र सुवेदीले भने ‘त्यो नातालाई बिर्सिएर सम्पत्तिका लागि हत्या समेत गरे ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धानले यी दुई महिला मात्र हत्यामा संलग्न छन् । उनीहरुले बेसबलको ब्याटले टाउकोमा हानी राणाको हत्या गरेका थिए । ब्याट राणाकै घरमा थियो । ८ बजे घरमा पुगेपछि टिभी कोठामा टिभी हेरिरहेकी राणालाई ब्याटले हालेर बेहोस गराएका थिए । त्यसपछि सिरानीले मुख छोपेर दुबै जनाले घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा एक्लै बस्ने महिलाको घरमा आउ जाउ गर्ने ब्यक्ति ’bout पत्ता लगाएको थियो । त्यसैका आधारमा अनुसन्धान गर्दै जादाँ यिनीहरुको संलग्नता देखिएको हो । जेनिशालाई घरको सबै विवरण थाहा भएको र राणा घटना हुनु १५ दिन अघि मात्र अमेरिकाबाट फर्केकी थिईन् । उनकी एउटी छोरी अमेरिकामा छिन् ।